सलमानको नजरमा बलिउडमा यी पाँच जनामात्र अभिनेता, को को हुन् ? - Sidha News
सलमानको नजरमा बलिउडमा यी पाँच जनामात्र अभिनेता, को को हुन् ?
एजेन्सी। बलिउड अभिनेता सलमान खानले बलिउडमा अहिले आफूसहित पाँच जना मात्र अभिनेता भएको बताएका छन् । उनका अनुसार साहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार र अजय देवगणमात्र अहिले बलिउडका अभिनेता हुन् ।
उनले स्टारडम संस्थागत गरेर राखिरहनु चानचुने कुरा नभएको पनि बताएका हुन् ।फिल्मफेयर पत्रिकाका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा सलमानले भनेका छन्, ‘हामी पाँच जनाले यो स्टारडम अब थप केही समय बाँकी राखिरहन सक्छौँ होला । यो त निकै कठीन काम हो ।’
हरेक आइतबार अमिताभ बच्चनको बंगला जलसा बाहिर प्रशंसकको ताँती लाग्छ र बिग बी पनि बाहिर आएर उनीहरुलाई भेट्छन् । तर पछिल्लो आइतबार (२० अक्टोबरमा) यस्तो हुन सकेन । सधैं झैं प्रशंसक त्यहाँ पुगे तर अमिताभ बाहिर आएर उनीहरुलाई भेट्न सकेनन् ।
यसको जानकारी अमिताभ आफैंले ट्वीटरमा दिएका छन् । साथै, प्रशंसकलाई भेट्न नसकेकोमा माफी पनि मागेका छन् ।अमिताभले जालसाबाहिर जम्मा भएका भीडको फोटो सेयर गर्दै ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘म यसो नगर्न भन्छु तरपनि उहाँहरु आइतबार भेटघाटका लागि आउनुहुन्छ । माफी चाहन्छु.. बाहिर आउन सकिनँ ।’
वास्तवमा, अमिताभ बच्चन बिरामी भएको खबर गत हप्ता सार्वजनिक भएको थियो । उनलाई तीन दिनसम्म नानावटी अस्पतालमा पनि राखिएको बताइएको थियो । शुक्रबार बेलुका उनलाई छोरा अभिषेक र श्रीमती जयासँग कारमा देखिएको थियो ।
यो भिडियो निकै चर्चित पनि भएको थियो । यसलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछिको भिडियो बताइएको थियो । यद्यपि, अस्पतालसँग जोडिएको स्रोतले बिग बी नियमित स्वास्थोपचारका लागि त्यहाँ गएको बताएको थियो ।
आफू बिरामी भएको खबर फैलिएपछि अमिताभ बच्चनले रिसाएर आफ्नो ब्लगमा लेखेका थिए, ‘कृपया आधिकारिक दस्तावेजको नियम–काइदालाई नतोड्नुहोस् । बिरामी हुनु र उपचार गराउनु गोप्य व्यक्तिगत अधिकार हो ।
यो शोषण हो र यसलाई व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गर्नु सामाजिक रुपमा गलत हो । सम्मान गर्नुहोस् र कुरा बुझ्नुहोस् । संसारमा हरेक कुरा बेच्नका लागि हुँदैनन् ।’